इनबाउन्ड मार्केटिंग मेड सरल | इन्डियानापोलिस वेब डिजाइन
वर्कशिट: इनबाउन्ड मार्केटिंग मेड सरल
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० बुधबार, फेब्रुअरी 9, 2022 लोरेन बल
केवल जब तपाईं यो ईन्टरनेट मार्केटिंग सामान मा एक ह्यान्डल लाग्छ, एक नयाँ बज सतहों। अहिले, इनबाउन्ड मार्केटिंगले गोलहरू बनाउँदैछ। सबैजना यसको बारेमा कुरा गर्दैछन्, तर यो के हो, तपाईं कसरी सुरू गर्नुहुन्छ, र तपाईंलाई कुन उपकरणहरू आवश्यक छ? इनबाउन्ड मार्केटिंग नि: शुल्क जानकारीको साथ सुरू हुन्छ, सामाजिक च्यानलहरू, खोज, वा सशुल्क विज्ञापन मार्फत प्रस्ताव गरिएको। उद्देश्य एक सम्भावना को जिज्ञासा स्पार्क र आफ्नो सामग्री को लागी उनीहरूको ईमेल, र सम्भव फोन नम्बर व्यापार गर्न को लागी हो।
त्यसो भए तपाई कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ?
एउटा प्रश्न खोज्नुहोस्
तपाइँको सम्भावित ग्राहक संग कुश्ती छ। तपाईंको उत्तरले उनीहरूलाई पर्याप्त जानकारी दिन आवश्यक छ, (स्पष्ट रूपमा बेच्न बिना) तपाईंको विशेषज्ञता प्रदर्शन गर्नुहोस्।
सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् - वर्कबुक र चेकलिस्टहरू, ईबुकहरू, भिडियोहरू, अडियो फाइलहरू वा स्प्रेडसिटहरू सहित सबै आकार र आकारहरूमा डाउनलोडहरू आउँदछन्। यो धेरै लामो वा जटिल हुनु आवश्यक पर्दैन, तर पर्याप्त जानकारी यसैले गम्भीर संभावनालाई तपाईले वास्तवमा चीजहरूको बारेमा बढि जानकारी लिनको लागि प्रेरित गरिने छ। do पैसाको लागि बेच्नुहोस्।
ल्यान्डि Page पृष्ठ तपाइँको सबै बाह्य पदोन्नतिले यस पृष्ठमा ट्राफिक ड्राइभ गर्नेछ। यो तपाइँको वेबसाइट मा एक पृष्ठ, एक विशिष्ट र सम्बन्धित विषय मा एक ब्लग पोस्ट, वा केवल एक उद्देश्य संग एक ल्यान्डिङ पृष्ठ हुन सक्छ: आफ्नो सामग्री को लागी आफ्नो इमेल ट्रेड गर्न को लागी मानिसहरूलाई प्राप्त गर्न को लागी अभियान को लागी एक अद्वितीय URL को साथ मापन गर्न को लागी अनुमति दिनेछ। व्यक्तिगत मार्केटिङ च्यानलहरूको प्रभावकारिता र तपाईंको रूपान्तरण दर कति बलियो छ। अनुकूलन ल्यान्डिङ पृष्ठहरू निर्माण गर्न, हामी वास्तवमै वर्डप्रेसको लागि प्रिमिस प्लगइन मनपर्छौं फार्मस्ट्याक डाटा संग्रह को लागी।
स्वत: प्रतिक्रियाकर्ता आज तपाईको जानकारी डाउनलोड गर्ने सबै खरीदका लागि तयार छैनन्। यसको मतलब तिनीहरू सडक किन्ने छैन। तपाईंको योजनाले दीर्घकालीन फाइदाहरू काट्नको लागि छुने श्रृंखला समावेश गर्नै पर्दछ। हामी यसमा अटोरेपोन्डर सुविधा प्रयोग गर्दछौं फार्मस्ट्याक एक ईमेल पठाउन, जुन साधारण डाउनलोड पछि एक वा दुई दिन व्यक्तिगत व्यक्तिगत नोट जस्तै देखिन्छ। यी नोटहरूले प्राय कुराकानीहरू, प्रतिक्रिया र अधिक जानकारीको लागि अनुरोधहरू उत्पन्न गर्दछ। हामी पनि मन पराउछौं निरन्तर सम्पर्क लामो ड्रिप अभियानको आधारको रूपमा।
एक पदोन्नति योजना को साथ यातायात ड्राइव। व्यक्तिले दुर्घटना द्वारा तपाईंको अवतरण पृष्ठलाई आवश्यक रूपमा फेला पार्दैन। सामाजिक प्लेटफार्ममा लिंक साझेदारी गर्नुहोस्। मित्रहरू र रणनीतिक साझेदारहरूलाई उनीहरूको समुदायमा लिंक साझेदारी गर्न सोध्नु ठीक छ यदि तपाईं तिनीहरूको लागि पनि त्यसो गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने। (र तपाइँ हुनु पर्छ) यदि तपाईंसँग नियमित ईमेल प्रोग्राम छ भने लिंक पनि समावेश गर्नुहोस्। यसले तपाईको डेटा बेसमा गम्भीर सम्भावनाहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ। धेरै वेबसाइटहरूको साथ तपाईंको वेबसाइटमा आगन्तुकहरूलाई नउठाउनुहोस्, तर फुटर, हेडर वा साइड पट्टीमा कार्यको लागि एक कल थप्नाले तपाईंको अवतरण पृष्ठमा इच्छुक सम्भावनाहरू बढाउनेछ। के तपाईले ल्यान्डि use पृष्ठमा ट्राफिक ड्राइभ गर्नको लागि तपाईंले पीपीसी प्रयोग गर्नु हुन्छ? त्यो तपाईंको बिक्री प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंसँग ग्राहकलाई कासक सम्पर्कहरू रूपान्तरण गर्न एक खास रणनीति छ भने विज्ञापनमा भएको लगानी फिर्ता लिन सक्छ। ब्रान्ड सचेतना निर्माण गर्न PPC प्रयोग नगर्नुहोस्।
व्यक्तिगत स्पर्श। एक स्वचालित प्रक्रियाले ढोका खोल्छ, तर यदि तपाईं वास्तविक बिक्री परिणाम चाहनुहुन्छ भने तपाईंले फोन उठाउनु पर्छ र सम्भावितसँग कुरा गर्नुपर्छ। के उनीहरूले यो जानकारी सहयोगी पाए? के उनीहरूसँग अतिरिक्त प्रश्नहरू छन्?
टैग: इनबाउन्ड मार्केटिङइनबाउन्ड मार्केटिंग कार्यपत्रकराउन्डपेगकार्यपत्र
डाटा चालित मार्केटिंग तातो छ!
ग्राफिक डिजाइन Jargon को लागी एक गाइड
राम्रो लेख। मलाई वेबिनार जाँच गर्न पर्याप्त रुचि थियो।
म कोल्ड लीड चाहिने प्रशंसक होइन, जसले तपाईंलाई अझै चिन्दैन, तपाईंलाई कार्यपत्र प्राप्त गर्नको लागि फोन नम्बर दिन। मैले तुरुन्तै पछाडिको बटन थिचेँ। म तिमीलाई राम्ररी चिन्दिन र तिमीले मलाई राम्ररी चिन्दैनौ। हामी मध्ये कोही पनि फोनमा कुरा गर्न इच्छुक हुनुपर्दैन।
मेरो इमेल ठेगानाको साथ, तपाईंले जडान जारी राख्न सक्नुहुन्थ्यो, मलाई पुन: प्ले गर्न आमन्त्रित गर्नुहोस् यदि मैले यो गरेन भने, आदि। । म फोन नम्बरहरूको फ्यान हुँ यदि निर्णय समयरेखा धेरै छोटो छ, जस्तै कार किन्ने। अझै पनि धन्यवाद पृष्ठ सम्म सोध्ने छैन, त्यसैले मसँग पहिले इमेल ठेगाना छ।
हामीले फोन नम्बरहरूको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा आन्तरिक रूपमा धेरै बहस गरेका छौं। हामीले परीक्षणको रूपमा स्विच बनायौं र नतिजा सकारात्मक भएको पाएका छौं। हामीसँग फारम डाउनलोड गर्ने कम योग्य सम्भावनाहरू छन्।
जबकि म प्रत्येक ग्राहकको लागि त्यो रणनीति सिफारिस गर्दैन, यसले हाम्रो लागि काम गर्दछ
'हाम्रो सेमिनार जाँच गर्नुहोस्' लिङ्कले मलाई निरन्तर सम्पर्क लगइन पृष्ठमा लैजान्छ?